Soo Iibso Kiniinka Hurdada & Daawooyinka Hurdada Adigoon Qorin [Hal Guji]
Waxaan helnay 4 alaabta aad heli karto
Soo Iibso Zopiclone
Waa maxay hurdo la’aanta?
Dhibaato ma kugu haysaa hurdada, ama waxaad la kulantaa daal iyo noocyo kale oo dhib ah maalintii? Waxaad u badan tahay inaad raadineyso jawaab su'aasha ah “Maxaan u seexan waayey?”. Haddii tani u egtahay maalin noloshaada ka mid ah markaa fursadaha waxaad leedahay hurdo la'aan.
Hurdo la’aanta waa nooc ka mid ah cilladaha hurdada. Bukaanka la xanuunsanaya xaaladan way ku adag tahay inay seexdaan, seexdaan, ama labadaba. Badanaa dadka dhibaataysan sidoo kale ma dareemaan nasasho markay toosayaan midkoodna.
Waxaa jira dhowr arrimood oo door ka ciyaara sida sababta hurdo la’aanta iyo hurdo la’aanta daba dheeraata ay u dhacaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxay tilmaamayaan diiqad, niyadjab, cuduro kale oo caafimaad, xanuun iyo xanuuno kale inay yihiin dambiilayaasha ugu weyn. Daal iyo daal waa bilow. Kuwa qaba hurdo la'aan daba dheeraatay, bukaanku waxay ka caban karaan shaqo xumo maskaxda, cabashooyinka jireed iyo isbeddelada niyadda. In kasta oo waxyaabahani aysan nafta halis gelinayn, haddana dhibaatooyinka jira ayaa aad u badan, kuwaasina waxay saameyn ku yeelan karaan qaab nololeedka iyo tayada nolosha qofka.
Haddii aad la il daran tahay dhibaatooyin xagga hurdada ah, fadlan kaligaa ha dareemin. Tani waa arrin caafimaad oo caan ka ah dalal badan.
Hurdo la’aanta waxay ku dhacdaa dadka da ’kasta, qowmiyado, iyo jinsi kasta ha ahaatee, laakiin waxyar bay ragga kaga badan tahay dumarka.
Xaqiiqdii, gudaha Mareykanka oo keliya, qiyaastii 30 ilaa 40 boqolkiiba dadka qaangaarka ah waxay muujiyeen inay dareemeen astaamaha cudurkaan hurdo la'aanta ah. Isla daraasaddan oo ay sameysay Xarunta Qaranka ee Cilmi-baarista Cilladaha Hurdada, 10 ilaa 15 boqolkiiba dadka qaangaarka ah waxay muujiyeen inay qabaan hurdo la’aan joogto ah. Qiyaastii 42 milyan oo Mareykan ah ayaa leh hurdo la'aan raagta.
Qofku wuxuu ku dhici karaa labada nooc ee hurdo la'aan:
hurdo la'aan muddo-gaaban (daran) ayaa sii socota dhowr maalmood ama toddobaadyo
hurdo la'aan muddo-dheer (daba-dheer) ayaa socota bilo
Hurdo la'aan joogto ah ayaa caadi ahaan heerka labaad u ah xaalad asaasi ah sida niyad jab ama isticmaalka daawooyinka loo qoro qaarkood. Hurdo la’aan ba'an ayaa caadi ahaan ah hurdo la'aan, taas oo ah hurdo la'aan aan lala xiriirin xaaladaha caafimaad ama dhibaatooyinka.
Calaamadaha hurdo la'aanta: waa maxay calaamadaha hurdo la'aanta?
Calaamadaha ugu waaweyn ee hurdo la’aanta waa awood la’aanta hurdada, seexashada, ama isku darka labada dhibaato. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay soo toosaan inta lagu jiro habeenkii oo ay awoodi waayaan inay ku noqdaan hurdo ama ay hurdada ka kacaan goor hore oo subax ah. Calaamadaha kale waxaa ka mid ah:
Dareen dareemid daal markaad soo toosto
Hurdo badan ama daal maalinnimo
Dhibaato ka-fiirsashada ama diiradda
Niyadjab ama walaac
Welwelka ku saabsan hurdada
Xakamaynta mootada oo liidata
Sababaha hurdo la’aanta: maxaa sababa hurdo la’aan?
Inaad seexan kari weydo waa wax aad u xun in la yeesho, waxaad moodaa inaysan jirin sabab muuqata oo aad u kici karto oo saacad kasta markay socoto waad sii odoraysaa sida aad daalka ugu noqon doontid shaqada maalinta xigta. Hurdo la’aanta keenta inaad rogrogto oo rogto waxay noqon kartaa hal shay ama waxay noqon kartaa arrimo kala duwan.
Fahamka waxa sababa hurdo la’aanta ayaa kaa caawin doonta inaad si dhakhso leh u seexato oo aad xal ugu hesho dhibaatadan waqti buuxa. Waxay sidoo kale macnaheedu noqon doontaa habeen hurdo fiican oo lammaanahaaga hurdada ah oo laga yaabo inay adiga u horseeddo hurdo la'aan adiga!
Weligaa ma maqashay qof leh dhibkaaga hurdo la’aanta ah ee ku haya ayaa madaxaaga oo dhan ku jira? Waa hagaag waxay noqon kartaa run. Sababaha nafsaaniga ah ayaa qeyb weyn ka ah in dadka ay soo jeedaan. Waqti badan dadku ma bartaan inay damiyaan oo ay joojiyaan ka fikirka dhacdooyinka maalinta markay guryahooda aadaan.
Welwelku wuxuu noqon karaa sabab weyn oo hurdo la'aan ah. Ka fikirida wixii ka dhacay shaqada iyo waxa dhici doona maalinta ku xigta ayaa habeenka oo dhan ku soo jiidi kara. Sidaas darteed waxaad uga walwalaysaa bixinta biilasha, sameynta nolol maalmeedka iyo waxyaabo kale oo badan oo ay tahay inaad wax ka qabato maalinba maalinta ka dambaysa.
Cadaadiska iyo xaaladaha walaaca ayaa sidoo kale noqon kara sabab hurdo la'aan. Ku adkaysiga waxyaabaha aadan wax ka beddeli karin ayaa hubaal habeenki oo dhan ku soo toosin doonta. Badanaa isku buuqsanaanta waxaa weheliya walaac markii aad labadan waxyaalood saxankaaga ku hayso way adkaan kartaa inaad habeenkii seexato.
In kasta oo hurdo la’aan badani ay sababto sababo nafsaani ah haddana waxaa jira xaalado marka arrimo jireed ay ciyaaraan. Isbedelada hormoonku waxay sababi karaan hurdo la’aan, gaar ahaan dumarka. Dumarku waxay la kulmi karaan hurdo la'aan inta lagu guda jiro uurka, caadada, iyo dayska. Cudurka premenstrual syndrome wuxuu sidoo kale u horseedi karaa dumarka la kulma hurdo la'aan.
Gabowgu wuxuu keenaa isbeddello badan oo jirka ah midkoodna waa hurdo la'aan. Melatonin waa hormoon xukuma hurdada. Markii aad sii weynaato ee aad hesho wax ka yar hormoonkan ayaa lagu qarinayaa jirka. Markaad gaarto da'da 60 heerkaaga melatonin aad ayuu hoos ugu dhici doonaa waxaana laga yaabaa inaad isku aragto inaadan awoodin inaad seexato wax badan.
Dhibaatooyinka neefsashada iyo xasaasiyadda ayaa sidoo kale kaa dhigi kara inaad soo jeedo. Inaadan seexan karin markaad isku aragto neef ama xasaasiyad waa wax caadi ah oo la fahmi karo maaddaama aad dareento raaxo la'aan si kasta oo aad u daallan tahay. Hubi si aad u ogaato in mid ka mid ah arrimahan ay sabab u noqon karaan hurdo la'aantaada ka dibna eeg waxa aad ka qaban karto.
Hurdo la’aanta waa cudur hurdo cabsi leh laakiin la maareyn karo. Calaamadaha hurdo la’aanta waxaa ka mid ah: hurdo la’aan, hurdo la carqaladeeyay, caro iyo hoos u dhigidda feejignaanta maskaxda iyo caddaynta. Sababaha hurdo la'aanta dadka waaweyn way kala duwan yihiin. In kasta oo dhammaan sababaha hurdo la'aanta dadka waaweyni ay gaar u yihiin dadka waaweyn, sababaha hurdo la'aanta carruurta ayaa leh xoogaa khilaaf ah. Farqiga u dhexeeya qaangaarka iyo ilmaha sababaha hurdo la'aanta waxay ku kala duwan yihiin iyo heerka sababaha.
Ciladda hurdo la'aanta: sidee baa lagu ogaadaa hurdo la'aan?
Dhakhtar ama khabiir ku takhasusay hurdada ayaa ku weydiin doona dhowr su'aalood oo ku saabsan taariikhdaada caafimaad iyo qaababka hurdada.
Baadhitaan jireed ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo eego xaaladaha aasaasiga ah ee suurtogalka ah. Marka xigta waxaad sidoo kale heli kartaa baaritaanka cudurada maskaxda iyo isticmaalka daroogada iyo aalkolada.
Si lagugu ogaado hurdo la'aan, dhibaatooyinkaaga hurdada waa inay socdeen in ka badan 1 bilood. Sidoo kale waa inay saameyn xun ku yeeshaan caafimaadkaaga. Waa inay sababayaan cidhiidhi ama khalkhal gelinayaan niyaddaada ama waxqabadkaaga.
Takhtarka ama khabiirka takhasuska leh ayaa ku weydiin kara inaad xafido buugga jiifka si aad si fiican u fahamto qaababkaaga hurdada.
Tijaabooyin kale ayaa laga yaabaa in loo baahdo sida polysomnograph. Tani waa tijaabo la qaado inta aad hurdada ku jirto si loo qoro qaababkaaga hurdo. Waa suurtagal in waxqabadka la sameeyo. Waxay ku shaqeyneysaa qalab yar oo curcurka lagu xiro oo la yiraahdo actigraph si loo cabiro dhaqdhaqaaqyadaada iyo qaababka hurdo-u-kicinta.
Daaweynta hurdo la'aanta: sidee loo daaweeyaa hurdo la'aan?
Daaweynta hurdo la'aanta si wax ku ool ah waxay ku xirnaan doontaa wax badan sababaheeda. Mararka qaar hurdo la’aanta ayaa iska baxda kaligeed, gaar ahaan haddii ay sababaan dhibaatooyin ku meel gaar ah sida jet lag. Waqtiyada kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad isbedel ku sameyso qaab nololeedkaaga sida inaad xirto fiilooyin dhegaha ah ama aad sameysid hurdo hurdo saaxiibtinimo leh si looga adkaado hurdo la'aanta.
Fursadaha daaweynta hurdo la'aanta ayaa la heli karaa, tusaalooyinka la dooran karo waxaa ka mid ah daaweynta dabeecadda garashada, qaadashada daawooyinka ay ansixisay FDA iyo xulashooyinka kale ee daaweynta dabiiciga ah sida isbeddelka qaab nololeedka.
Daaweynta Dabeecadda Aqoonta ama CBT
Mid ka mid ah xulashada daaweynta hurdo la'aanta ee joogtada ah waa iyada oo loo marayo isticmaalka daaweynta dabeecadda garashada ama CBT. Tan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hab aan caafimaad ahayn oo lagula tacaalayo cilladda hurdada. Xulashadaan daaweyntan waxaa lagu aasaasay aaminsanaanta in hurdo la'aanta daba dheeraata ay badanaa dhacdo iyadoo lala socdo arrimo dhowr ah. Xulashadaan daaweynta ah, bukaanka waxaa wax laga weydiin doonaa cilladaha hurdo la'aanta waxaana tan loo yaqaan wareysiga daaweynta. Iyo si wax ku ool ah loo daaweeyo cilladda, dhowr habab ayaa loo tixgelin doonaa sida xaddidaadda hurdada, xakameynta kicinta iyo nadaafadda hurdo ee saxda ah. Dhammaan qaababkani waa in lagu kaabo nasasho habboon.
Isticmaalka daawooyinka ay ansixisay FDA (kaniiniyada hurdada)
Waxaa jira dawooyin badan oo hurdada ah oo ay isticmaalaan una isticmaalaan bukaano badan oo hurdo la aan ah, tiro ka mid ah kaniiniyada hurdada ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin daawooyin aan lagaa iibsan karin. Laakiin daawooyinkaan oo dhami maaha kuwo waxtar u leh hurdo la’aanta. Sida ku xusan shirkii 2005 NIH ee maaraynta hurdo la'aanta, kaliya agonistayaasha soo dhaweynta benzodiazepine ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo waxtar leh oo ka badbaado hurdo la'aan. Shirka ayaa sidoo kale lagu faahfaahiyay xaqiiqda ah in dawooyinka kale ee hurdada ay taageerayaan cadeymo aan ku filneyn marka ay timaado waxtarka iyo badbaadada.
Adeegsiga dawooyinka dabiiciga ah
Dad badan ayaa la yaaban nooca dawooyinka hurdada dabiiciga ah ee la isticmaalo laakiin dhammaan xalalka hoos ku xusan waxay leeyihiin taariikh dheer oo wax ku ool ah laakiin waliba badbaado leh.
udugga - Waxaa jira dawooyin badan oo hurdo dabiici ah oo ku lug leh udgoon iyadoo udgoonku ugu caansan yahay. Markii la isticmaalay boqollaal sano ka hor, nidaamka gudbintu wuxuu ahaa mid ceyriin laakiin maanta, aalado rakhiis ah ayaa la iibiyaa taas oo saliidaha muhiimka ah ee gaarka ah lagu kululeeyo iyadoo udgoonku buuxiyo hawada isla markaana dhiirrigeliya hurdo nasasho leh. Saliidaha lagama maarmaanka ah ee ugu waxtar badan waxaa ka mid ah lavender, sandalwood, chamomile, iyo rosemary.
Kaalshiyamka iyo Magnesium - Labadan waxyaalood ee dabiiciga ahiba waxay hurumarinta hurdada laakiin marka la isku daro, heerka waxtarku si weyn kor ugu kacaa. Waxa ugu weyn ee ku saabsan dawadan gaarka ah ayaa ah in iyadoo qofku ugu dambeyn helo hurdo loo baahan yahay, maaddooyinkan ay bixiyaan faa'iidooyin caafimaad. Tusaale ahaan, kaalshiyamku wuxuu xoojiyaa cufnaanta lafaha halka magnesiumku uu kahortago cudurrada wadnaha iyo xididdada.
Hops - Dadka badankood waxay ka fikiraan biir markay maqlaan erayga "hops" laakiin ubaxdan dheddigga ah waxay dhab ahaantii bixisaa saameyn dabiici ah oo dejinta. Arrinta xiisaha lihi waxa weeye, buun-buunintu waa dawo debecsan oo jilicsan markii la qaato qiyaas 30 ilaa 120 miligram ah oo ku saleysan sababta iyo darnaanta dhibaatada hurdada, hurdo ayaa imaaneysa waxyar ka dib markii la seexdo.
L-theanine - L-theanine daahir ah waa amino acid xoog leh oo ka yimaada shaaha cagaaran. Dadka intiisa badani way ogyihiin in shaaha cagaaran loo adeegsaday ujeeddooyin daawo mudada kumanaan sano ah sidaa darteed waxay macno u leedahay in tani ay ka mid noqon doonto daawooyinka hurdada dabiiciga ah ee ugu wanaagsan. Hal dariiq oo loogu soo bandhigo amino acid-ka jirka ayaa ah in la cabo seddex koob oo shaah cagaaran ah maalin kasta laakiin waxaa taas weheliya, shaah cagaaran oo tayo sare leh ayaa la qaadan karaa. Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee L-theanine ayaa ah inay dhiirrigeliso hurdo nasasho leh habeenkii laakiin waxay soo saartaa feejignaan deggan oo maalintii ah.
Isnasiinta - Dajinta maskaxda iyo jidhka adoo adeegsanaya fekerka ayaa faa iido u leh dad badan oo la halgamaya helitaanka hurdo sax ah. Fikirku wuxuu ku yimaadaa qaabab kala duwan sidaa darteed shaqsi ayaa dooran kara midka la doorbidayo oo ay ku jiraan salaadda, yoga, muuqaalka, sawirrada, iyo wixii la mid ah. Natiijooyinka ugu wanaagsan, waxaa lagugula talinayaa in qaabka fekerka la xushay loo isticmaalo 10 daqiiqo kahor wakhtiga jiifka.
Melatonin - Mid ka mid ah kuwa ugu faa iidada badan dhammaan maaddooyinka loo isticmaalo dawooyinka hurdada ee dabiiciga ah, melatonin waa hormoon lagu soo saaro jidhka si loo dhiirrigeliyo hurdada. Si kastaba ha noqotee, marka qofku leeyahay yaraanta hormoonkan ama uu ku dhaco dhibaato hurdo oo aad u daran, qaadashada melatonin oo ah qaab dheeri ah ayaa caawin doonta. Hal qoraal oo muhiim ah ayaa ah in halista sunta, dhalmo la’aanta, iyo niyadjabka ay jiraan haddii qiyaasta ay aad u sarreyso sidaa darteed ay lama huraan u tahay qofku inuu la hadlo dhaqtar kahor qaadashada kaabadan.
Valerian Dhammaan walxaha loo isticmaalo samaynta dawooyinka hurdada ee dabiiciga ah, Valerian ayaa laga yaabaa inay tahay geedo badanaa la isticmaalo. Dadka badankood, valerian waxay dhiirrigelisaa hurdo dheer laakiin waxay kaloo dedejisaa waqtiga ay qofka ku qaadato inuu seexdo waxayna sare u qaaddaa tayada hurdo.
Salad Duurjoog ah - Salad duurjoogta ah ee daaweynta hurdada dabiiciga ah waxaa laga iibsan karaa dukaanka cuntada oo dhan, suuqa beeraleyda maxalliga ah, mararka qaarkood qaybta dabiiciga ah ee dukaamada waaweyn, ama haddii la doorbido, lagu beero beerta guriga. Marka hurdo liidata ay la xiriirto Cilladda 'Syndrome Leg Syndrome' ama walaac, salaar duurjoogta ah ayaa si weyn u shaqeysa taas oo soo saarta saameyn deggan waxayna yareysaa raaxo la'aanta la xiriirta RLS.
Is beddelka hab-nololeedka
Dad badan ayaa dhibaato ku qaba inay seexdaan. Cilladan hurdo la’aanta ah waxay saameysaa qiyaastii 3.5 milyan oo Mareykan ah sanad walba. Waa kuwan talooyin kooban oo hab nololeed ah oo hagaajin kara hurdadaada:
Samee jadwal - markaad seexato xilli hore habeen hore iyo dambe dambe, jirkaaga ma garanayo goorta ay tahay inaad toosto ama aad seexato iyo waqti dheer, waxaad la kulmi kartaa wax lamid ah jet daba-dheer. Daaweyntu way fududahay, saacad isku mid ah dhig habeen kasta iyo subax kasta, oo ay ku jiraan dhammaadka usbuuca. Dabcan waxaa jiri doona waxyaabo ka reeban mararka qaar, laakiin haddii aad seexato isla waqtigaas isla markaana aad toosto isla waqtigaas, tani waxay kaa caawin doontaa inaad hurdo fiican ku seexato.
Jimicsiga - xoogaa jimicsi ah ayaa daawo weyn u ah hurdada iyo hurdada. Jimicsigu wuxuu yareyn karaa culeyska fekerka taasna waxay sahleysaa inaad hurdo seexato oo aad seexato. Nooc kasta oo jimicsi jimicsi ah ayaa sameyn doona khiyaanada; si kastaba ha noqotee, iska ilaali jimicsiga seddex saacadood ka hor intaadan seexan maxaa yeelay taasi waxay sababi kartaa in laguu bamgareeyo si aad u seexato.
Maxkamadeynta - ka bood waxyaabaha kiciya sida kafeega, kafeega ayaa ah waxa ugu cad laakiin waxaa ku filan soodhada, shukulaatada, aalkolada, daawooyinka cuntada iyo xanuun joojiyaha. Daawooyinka sida shaaha geedaha ayaa kaa caawin doona inaad hurudo oo aad seexato. Haddii aad sigaar cabto, halkan waxaa ku yaal sabab kale oo aad u joojin karto, nikotiinku wuxuu kiciyaa cadaadiska dhiigga iyo garaaca garaaca wadnaha, labaduba way adkeynayaan in la seexdo.
Cuntada - fiirso waxa aad cunayso, wax kasta oo calooshaada xanaaqa waa in laga saaraa liiska cuntada. Ha cunin wax culus oo ku dhow wakhtiga jiifka maxaa yeelay habka dheef-shiidka ayaa kaa ilaalin doona inaad soo jeedo. Waad kaga adkaan kartaa gaajadaada intaad seexanaysid koob biyo ah oo caano ah waxayna kaa caawin doontaa inaad huruddo maxaa yeelay waxaa ku raran tryptophan, amino acid uu jirku u isticmaalo inuu soo saaro kiimiko maskaxeed oo loo yaqaan serotonin kaas oo joojiya dhaqdhaqaaqa neerfaha.
Iska ilow kaniiniyada hurdada - dhakhaatiirtu waxay u qori doonaan kaaliyeyaasha hurdada kuwa ugu adag ee hurdo la’aanta ah si ay u jabiyaan wareegga si ay hurdo u helaan, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la isku dayo qalabka hurdada ee dabiiciga ah si loo daaweeyo hurdo la’aanta. Waxyaalaha kaniiniyada hurdada ahi waxay noqon karaan kuwo balwad leh oo ay adag tahay in laga fogaado. Iyo, waqti ka dib, waxay lumiyaan waxtarkooda waxaadna ku dambaysaa inaad sii kordhiso.
Walwal kama qabo sariirta - ha seexan walwal. Go'aanso goob iyo waqti aad ka walwalayso dhammaan waxyaabaha ku dhibaya ka dibna ha seexin. Waad ka walwalaysaa waxyaabaha jikada ama qolka fadhiga, laakiin qolka jiifka kuma jiraan. Qor iyaga oo dhig meel aamin ah - bannaanka qolka jiifka - taariikhda welwelkaaga. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hurdo la'aan u walwasho. Way adkaan doontaa marka hore, laakiin waad sameyn kartaa.
Halkaas uun ha ku jiifsan - haddii 15-20 daqiiqo kadib aadan seexan karin ama dib u seexan karin, kac oo samee wax lagu caajiso. Akhriso buug, ka fikir, fiirso telefishanka, inkasta oo ayna jirin wax kicin kara, ilaa aad diyaar u tahay inaad hurudo.